Accueil > Gazetin'ny nosy > Ben’ny tanàna : Lasa kandida IRD ireo jiolahy pôlitika
Ben’ny tanàna : Lasa kandida IRD ireo jiolahy pôlitika
Mampiteny ny moana tanteraka ny toe-draharaha pôlitika ankehitriny eto Madagasikara. Miady ho kandidà IRD(Isika rehetra miaraka amin’i Rajoelina) avokoa ireo mpilatsaka hofidiana ho ben’ny tanàna any amin’ny toerana maro eto Madagasikara na ambanivohitra na an-tanan-dehibe . Iadiana tanteraka ny ho kandida amin’ity vondrona pôlitika mpanohana an’ingahy Andry Nirina Rajoelina izay filoham-pirenena amin’izao fotoana izao.
Tsotra dia tsotra no famalin’izy ireny raha anontanianay ny antony iadiany ho kandidan’ny IRD. Satria hono io antoko io ihany no azo antoka fa hahalany. “Tsy miraharaha izay Moramanga may any hono izy ireo fa ny lanitra manga ihany no jereny”. Tsy miraharaha izay IEM (Initiative pour l’émergence de Madagascar) izy ireo. Tsy miraharaha izay velirano izany koa. Mila lany ary lasa ben’ny tanàna no tanjona satria izay koa no mba faniriany any amin’ny kaominina misy azy any.
. Ireo izay te hilatsaka ka tsy tafiditra ao amin’ny IRD dia niala avy hatrany tsy ho kandidà. Marihina koa nefa fa niteraka olana amin’ny olona mpomba ny fanjakana ankehitriny ity ady toerana any amin’ny kaominina ity. Maro no fitarainana azo amin’izany ary efa manao vavabe ireo tsy lany fa hifankahita eo hono. Ny lasa kandida indray dia mizesta fa efa ben’ny tanàna avy hatrany.
Ny any amin’ny faritra Antsiranana voalohany iny aza dia ilay antsoina hoe “diaspora” no voatendry avy aty ambony ka mitaraina mafy ny mpomba an’i AndryRajoelina any amin’ity faritra ity. Malagasy nafarana avy any andafy mbola tsy ampy iray volana izay hoy ny loharanom-baovao.
Tsy ny any amin’ity toerana ity ihany fa any amin’ny faritany maro. Misy miova indroa na intelo ny kandidà raha ny tatitra azonay hatrany.
Raha ireo rehetra ireo no asian-teny dia mety hamitaka an’i Andry Nirna Rajoelina ihany ireo ben’ny tanàna izay ho voafidy amin’ny anaran’ny IRD satria olona tsy matotra sy tsy miraharaha raha tsy toerana ihany. Noho izany dia handao an’i Andry Rajoelina ireo rehefa tonga ny fotoana ilana azy ireo fa hiantsampy amin’olon-kafa toa ny nataon’ny ben’ny tanàna HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) marobe manerana an’i Madagasikara, izay namadika an’i Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo.
Tokony hitandrina ihany izy eo anatrehan’izany fa mamitaka ireo kandidà jiolahy pôlitika ireo sy mpamadika palitao gaigilahy ireo.TIM nivadika HVM dia izao nivadika IRD indray.